Indlela yokuSebenzisa iiPoint Oil Oil
Izizathu ezi-5 zokuba ufuna ukutshintshela kumaPuphu aHlutywe ngamanzi
I-oil paint paintings iyakusasaza ingcamango, kodwa i-oyile e-soluble yamanzi iya kuhlala. Abaphandi abaninzi baye bafumanisa uvuyo lokusebenza nala mafutha amasha kwaye kukho izizathu ezininzi zokuba ucinga ukuba wenze njalo.
Amafutha adibanisa ngamanzi afanelekileyo kubaphandi abanobuchopho kunye nalabo basebenza kwii-studios zasekhaya. Kwakhona isingeniso esihle kwipeyinti yeoli , ngoko abaqalayo banqwenela ukuphonononga le ndlela kunye.
Ziziphi iiPaulity Oil Oil?
Okokuqala, kubalulekile ukuqonda ukuba yiyiphi ipeyinti yeoli e-soluble yamanzi. Azingekho esekweni samanzi , kodwa ipeyinti engenawo amanzi kunye nokuhlukana okubalulekileyo. Ezi peyinti zi-oyile zangempela, zikwazi nje ukuxutywa kunye nokucocwa ngamanzi.
Ukuchithwa kwamanzi kuthetha ukuba ungasebenzisa amanzi ukunqanda ipeyinti yeoli (nangona i-oil mediums such as linseed okanye i-oil stand) ingasetyenziswa kwakhona). Nangona sifunde kwisikolo samabanga aphansi ukuba amanzi kunye neoli akuxubeki, ukuxutywa kwamanzi (okubizwa ngokuba ngamanzi angcolileyo okanye amafutha angenaso-solvent) iipaliti zenziwe ukuba zamukele amanzi kwaye zijikeleze loo mqobo yemichiza.
Ezi peyinti zigcina zonke iipalenti abazithandayo ngamapende eoli. Benza kube lula, kufumaneke, kwaye kulula ukusebenza kunye namafutha. Ngoqheliselo kunye nokuqwalasela indlela ezixutywe ngayo, i-oil mixable oil ivelisa imifanekiso enobungqina obunqamle ubunzulu bombala kunye nokubunjwa kwezinto ezenziwa ngamafutha endala.
Iingenelelo zamanzi aHlutyisiweyo ngamanzi
Abavakalisi baye bathatha ixesha elide bacinga iipilisi zeoli ukuze zibe yi-crème de la crème xa kuziwa kuma-mediums. Bathatha ubuchule obuninzi kunye nokunyamekela ukusebenzisa, kodwa bayavuzwa ngenxa yeempawu kunye nemibala emihle abanokuyivelisa. Iingubo zeoli ziyanconywa ngenxa yobomi babo kunye nokuzinyameka.
Njengoko zinjengamafutha amaninzi, zihlala zineengxaki. Ixesha elide lokumisa kunye ne-fumes ephazamisayo kwi-solvents ziphakathi kwezikhalazo ezinkulu ezivela kuma-artists malunga namafutha. Ezi zinokusongela abaqalayo kunye nokubangela ukuba abaculi beentlungu kunye nezinye izinto ezixhalabisa (njenge-studio ekhaya kunye nezilwanyana ezifuphi eziseduze) ukuze ugweme olu hlobo lwepeyinti.
Amafutha anqabileyo ngamanzi adlulisa ezi nkxalabo kwaye kukho ezininzi iinzuzo zokuzisebenzisa:
Uvuyo kunye nokukhangeleka kokusebenza ngamafutha ngaphandle kweetyukliya kunye nefuthe ezifumanekayo kwi-turpentine kunye nezinye izixhobo ezisetyenziswa ngamafutha omveli.
Isikhathi sokumisa ngokukhawuleza kunamafutha omveli.
Ixesha elide lokusebenza nepende kunokuba i-acrylic asekelwe ngamanzi ivumele.
Ukuxubusha ngamanzi, ioli edibeneyo, okanye ezinye i-solvents ukuvelisa iziphumo ezahlukeneyo.
Kunokwenzeka ukuxuba oku kunye namafutha endala kunye nezinye iiprikisi ze-acrylic.
Ukusebenzisana Namafutha Ocubungulayo Amanzi
Xa uqala ukusebenza kunye namafutha anqabileyo ngamanzi, uya kufumana ukuba bafana nokusebenza ngamafutha endala. Bavumba njengeoli kwaye ungasebenzisa ezininzi ezifanayo.
Ukhetho lwakho lukhulu. Nangona ungasebenzisa amanzi kumatshini amancinci eoli anqumlekileyo, kungenakukukhetha kwakho. Amanzi alungileyo aya kudala umbala ogqithisileyo kunye nopende oluxubhayo olungaqhubi kakuhle okanye lusebenza kakuhle xa ezinye iioli zidibaniswa.
Enyanisweni, amanzi angasetyenziswa ngokufanelekileyo ekuhlambulukeni ngala mapayipi.
Ioli edibeneyo yomdaka ingasetyenziselwa ukucoceka kwamanzi amanqabileyo ngamanzi kwaye iya kunika umzobo i-nice sheen kwaye yongeza ubunzulu kumbala. Kukho i-linseed, i-safflower, kunye namanye amafutha atyilwe ngokukodwa okulungiselelwe ukusebenza nala mafutha angewona amasiko.
Uyakukwazi kwakhona ukusebenzisa amanye ama-mediums ukwenza ngokwezifiso amava odweba kunye neqhekeza eligqityiweyo. Phakathi kwala ma-medium-drying mediums, i-oil oil, i-impasto kunye ne-medieval mediums, kunye ne-mixers ukunika imibala enemibala eninzi ebonakalayo.
Sebenza ngesantya sakho. Abaculi abaninzi banandipha isantya esivela ekusebenzeni ngamanzi anqabileyo ngamanzi. Ezi zibumba zomile ngokukhawuleza kunezixhobo zendabuko, nangona zingekho ngokukhawuleza njenge-acrylics. Ngokomyinge kwaye kuxhomekeke kwindlela upende ngayo, unako ukwenyukela kwiiyure ezingama-48 zexesha elimangalisayo kunye nale mibini ngaphambi kokuba ikhulule i-elasticity.
Ungazixuba kunye namanye amapende. Ngenxa yokuba ioli echitshiweyo yamanzi ibonisa ibhulorho phakathi kweoli kunye neeprikisi ze-acrylic, ziyakuthi zixutywe kunye. Uya kufuneka uzame kwaye ukhethe ngobulumko, kodwa kunokwenzeka.
Xa udibanisa namafutha endala , ukhulula enye yokukwazi ukudibanisa upende ngamanzi. Abaculi abaninzi baye bafumanisa ukuba ixabiso elincinci leoli (ngaphantsi kwe-25%) luluhlu olufanelekileyo ukuba ufuna ukugcina ukuzululwa kwamanzi. Kwakhona, i-solvent-based based solvent like oil oil isenokukunika iziphumo eziphezulu.
Hlola nge-acrylic acrylic paint manufacturer ukuqinisekisa ukuba ixutyushwa ngamanzi anelisayo . Akunakwenzeka ukusebenzisa nayiphi na i-acrylic ngale ndlela yokupenda, ngoko qi niseka ukuba uphando ngemveliso ozimisele ukuyisebenzisa. Ngama-acrylics, i-25% okanye ingezantsi ixabiso eliphakanyisiweyo lokuxuba.
Imibala idibanise kakuhle. Unokufumanisa ukuba kulula ukuxuba amafutha anelululweyo yamanzi kunokuba udibanise amafutha omthonyama xa uvelisa imibala emitsha. Abadlali abaye benza umtshintshi bachukunyiswe ngemibala ephazamisayo abayifumana ngayo iingubo kunye nokuba bafumene nzima ukuvelisa umbala 'odaka'.
Unokuthi uqaphele ukuba ezinye iingubo zibonakala zicacile kunokuba zikhona kunye nabahlobo bazo base-oli. Abanye abaculi baqaphele lo mmahluko kunye nokuthandwa kwe-green viridian kunye ne-cobalt eluhlaza okwesibhakabhaka.
Ngokubanzi, basebenza njengamanye amaphepha eoli. Udweba ngamanzi anqabileyo ngamanzi ifana nokupenda kunye nayiphi na ioli. Unokufumanisa ukuba ufumana i-coverage engcono ngenxa yokuba bathambekele ekusasazeni ngakumbi xa ufezekisa ngokufanelekileyo.
Njengamanye amafutha, kulula kakhulu ukufumana i-opaque layers of pein on clock or board. Ukudala ukuthungwa nokugxininisa imivimbo yakho yebrashi ngenxa yempembelelo ilula kwaye ifana neoli.
Enye into enokuyonwaba ngakumbi ngamanzi anqabileyo ngamanzi yinto elula yokudala amaqabunga avulekileyo kunye nokuhlanjululwa kwamanzi. Yilapho ukukwazi ukuxuba i-pigment ngamanzi kunceda gqitha.
Iphulo: Ioli edibeneyo isebenza ngokumangalisayo ngokuvuselela i-oil edibeneyo yamanzi kwi-palette yakho.
Ukulila ixesha kunye nobude bemibala yakho
Amanqaku amaninzi ahamba ekudaleni i-oyile ene-soluble yamanzi kunye nokuqulunqwa kwezinto kuthatha izinto ezininzi. Amafutha anqabileyo ngamanzi ayenzelwe ukukhusela ukuphuza kwaye kufuneka aphathwe njengawo nawuphi na umzobo weoli xa usugqibile umsebenzi.
Vumela ixesha elide lokumisa -iveki kwiinyanga ezimbalwa kuxhomekeke kubukhulu kunye nokusetyenziswa kwe-solvent-kwaye ugweme amagumbi amnyama, amancinci.
Ukukhawulezisa ixesha lokumisa, faka umgangatho wokumisa ngokukhawuleza kwipeyinti.
Ukuba usebenzisa amanzi, ixesha elifutshane lokumisa liyadingeka ngenxa yokuba amanzi aphuphuma ngokukhawuleza kunokuba i-solvents-based solvents.
I-Varnish yagqiba imizobo njengoko uyenayo nayiphi na ioli. Njengamaxesha onke, qiniseka ukuba umzobo uphelile, kungekhona nje omile kumgca.
Amafutha anelulululweyo yamanzi ayingqamaniso kwihlabathi lokudweba, ngoko kunzima ukusho ngokuthe ngqo ukuba bahle kangakanani xa kufikelele kwixesha elide. Abaculi abaye bawasebenzisa iminyaka ayiboni nomehluko kwimifanekiso yabo yokuqala kwaye babonakala bacinga ukuba baguga kunye namafutha endala.
Qiniseka ukuba uqedile imidwebo yakho ngokufanelekileyo ukuze ugweme ukusila, ukuqhekeka, kunye nokugqitywa kunye nefuthe leoli elixutywe ngamanzi kufuneka lilungele iminyaka.
Ukucocwa mhlawumbi kunenzuzo enkulu yamapayipi agxutywe ngamanzi. Ukuba uye wagwema amafutha ngenxa yokuba uyazonda ukuhlambulula iibhululo, ke le yipuphu kuwe. Ixesha lakho lokucoca liyakunqunywe kwisiqingatha, unokuphefumla ngokulula ngenkqubo, kwaye awuyi kushiywa ngezandla ezinemibala, izibhulu, kunye neengubo.
Ngokuqhelekileyo, amanzi ase-soapy yinto efunekayo kuphela ukucoca iibhothi zakho.
Ukuze upopu olunenkani, ungazama ukuyikhulula ngokuxubha ama-crystal ngeoli.
Iingcebiso ezili-10 eziPhambili zoTywala zeInja
Iimfazwe ze-Roses: iMfazwe yase-Towton